အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးစိုင်ခဲကို အပီအပြင် ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်တဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး – Real Link
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးစိုင်ခဲကို အပီအပြင် ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်တဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
By Cele PhyoPosted on April 21, 2021
မတ်မတ် နွယ် လို့ လူငယ် ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစား နေ တဲ့ မော် ဒယ်လ် ၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး နွယ်ဒါလီထွန်း ကို သိကြမယ် ထင် ပါတယ် နော်..။သဘော ကောင်းသူ ဖြစ်ပြီး ချစ်ဖို့ ကောင်း တဲ့ အပြု အမူလေး တွေ ကြောင့် ယောက်ျားလေး ပရိသတ် တွေ သာမက မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေကပါ ဝန်းရံ အား ပေးလျက် ရှိ တာဖြစ်ပါ တယ်..။ ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား ဟာ အပြစ် ပြော စရာ မ ရှိ အောင် ညီညာ လှပ တာ ဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယား မင်းသမီး တစ်ယောက် လို အ သား အရေ ဖြူဝင်း ချော မွတ် တာ ကို ပရိသတ် တို့ အနေ နဲ့ ရှုမြင် ခံစားခဲ့ ကြ ရမှာ ပါ..။
သူမ ရဲ့ လတ်တလော အနုပညာ လှုပ်ရှား မှု ဟာ ဆိုရင် တော့ photo shooting တွေ ရိုက်ကူး လေ့ ရှိ ပြီး၊ mtv သီချင်း အမိုက်စား တွေ ကိုလည်း ရိုက်ကူး ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ်.. Team 143 ရဲ့ “ မတ် မတ် ” သီချင်း မှာ လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထား သလို.အသဲ ကွဲ သာဓု ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကြီး မှာ လည်း နိုင်ငံကျော် မင်းသား တွေ နဲ့ အတူ တွဲ ဖက် သရုပ်ဆောင် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်..။ထို ဇာတ် ကား ကြီး ဟာ ဆို ရင် တော့ ဒါရိုက် တာ ညွှန့်မြန်မာ ညီညီ အောင် ရိုက် ကူး ပုံဖော် ထား တာ ဖြစ်ပြီး အကယ် ဒမီ ️ပြေတီဦး ၊ ဇေရဲထက် နဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်း တို့အပြင် အခြား အနု ပညာ ရှင် ပေါင်း များ စွာ တို့ ပါဝင် ရိုက်ကူးသွား မှာဖြစ်ပါ တယ်..။
နွယ်ဒါလီထွန်း ဟာ ပရိ သတ် ကြီး နဲ့ အဆက် အသွယ် မပြတ် ရ အောင် လူ မှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ facebook ပေါ် တွင် သူမရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု ၊ အနု ပညာ လှုပ်ရှားမှု အမျိုးမျိုး ကို အ စဉ် အမြဲ ဖော်ပြပေး လေ့ရှိ တာ ဖြစ် ပါ တယ်..။အခု တစ်ခါမှာ ဆိုရင် လည်း “ လက်သည်း က အသက် ” ဆိုတဲ့ status လေး နဲ့တကွ ပုရိ သ တွေ စွဲမက်ဖွယ် အလှ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို သူမရဲ့ official facebook acc တွင် ထုတ် ဖော် ပြသ ထားပြီး ပရိ သတ် ကြီးလည်း သိရှိ ခံစား ရ အောင် ပြန်လည် မျှဝေ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော်…။
မတ္မတ္ ႏြယ္ လို႔ လူငယ္ ပရိသတ္ ေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစား ေန တဲ့ ေမာ္ ဒယ္လ္ ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ႏြယ္ဒါလီထြန္း ကို သိၾကမယ္ ထင္ ပါတယ္ ေနာ္..။သေဘာ ေကာင္းသူ ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္း တဲ့ အျပဳ အမူေလး ေတြ ေၾကာင့္ ေယာက္်ားေလး ပရိသတ္ ေတြ သာမက မိန္းကေလး ပရိသတ္ ေတြကပါ ဝန္းရံ အား ေပးလ်က္ ရွိ တာျဖစ္ပါ တယ္..။ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳး အစား ဟာ အျပစ္ ေျပာ စရာ မ ရွိ ေအာင္ ညီညာ လွပ တာ ျဖစ္ၿပီး ကိုးရီးယား မင္းသမီး တစ္ေယာက္ လို အ သား အေရ ျဖဴဝင္း ေခ်ာ မြတ္ တာ ကို ပရိသတ္ တို႔ အေန နဲ႔ ရႈျမင္ ခံစားခဲ့ ၾက ရမွာ ပါ..။
သူမ ရဲ့ လတ္တေလာ အႏုပညာ လႈပ္ရွား မႈ ဟာ ဆိုရင္ ေတာ့ photo shooting ေတြ ရိုက္ကူး ေလ့ ရွိ ၿပီး၊ mtv သီခ်င္း အမိုက္စား ေတြ ကိုလည္း ရိုက္ကူး ထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္.. Team 143 ရဲ့ “ မတ္ မတ္ ” သီခ်င္း မွာ လည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထား သလို.အသဲ ကြဲ သာဓု ” ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ႀကီး မွာ လည္း နိုင္ငံေက်ာ္ မင္းသား ေတြ နဲ႔ အတူ တြဲ ဖက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ထို ဇာတ္ ကား ႀကီး ဟာ ဆို ရင္ ေတာ့ ဒါရိုက္ တာ ညႊန႔္ျမန္မာ ညီညီ ေအာင္ ရိုက္ ကူး ပုံေဖာ္ ထား တာ ျဖစ္ၿပီး အကယ္ ဒမီ ️ေျပတီဦး ၊ ေဇရဲထက္ နဲ႔ ႏြယ္ဒါလီထြန္း တို႔အျပင္ အျခား အႏု ပညာ ရွင္ ေပါင္း မ်ား စြာ တို႔ ပါဝင္ ရိုက္ကူးသြား မွာျဖစ္ပါ တယ္..။
ႏြယ္ဒါလီထြန္း ဟာ ပရိ သတ္ ႀကီး နဲ႔ အဆက္ အသြယ္ မျပတ္ ရ ေအာင္ လူ မႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု ျဖစ္ တဲ့ facebook ေပၚ တြင္ သူမရဲ့ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈ ၊ အႏု ပညာ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို အ စဥ္ အျမဲ ေဖာ္ျပေပး ေလ့ရွိ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။အခု တစ္ခါမွာ ဆိုရင္ လည္း “ လက္သည္း က အသက္ ” ဆိုတဲ့ status ေလး နဲ႔တကြ ပုရိ သ ေတြ စြဲမက္ဖြယ္ အလွ ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို သူမရဲ့ official facebook acc တြင္ ထုတ္ ေဖာ္ ျပသ ထားၿပီး ပရိ သတ္ ႀကီးလည္း သိရွိ ခံစား ရ ေအာင္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post တင်းကိတ်လှတဲ့ သူမရဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေကို မြင်သာအောင် ဖွင့်ဟပြကသလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် အိန်ဂျယ်ကို ရဲ့ ဗီဒီယို
Next post ဖြူဖွေး ဝင်းဥနေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေနဲ့ အသည်းယားစရာ ကောင်းနေတဲ့ ဆုအိမ့်စံရဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ပုံရိပ်လေးများ